Wasiirka Hawlaha Guud Oo Ka Hadlay Nabadeynta Laba Ardaa Oo Ku Diriray Guumays - Haldoornews
Jul 6, 2015 Cabdirisaaq Khaliif Axmed, Guumays, wasaaradda Hawlaha Guud iyo Guriyaynta JSL
Xukuumadda Somaliland ayaa ergooyin nabadeed oo gurmad ah u dirtay xurguf colaadeed oo dhawaan laba beelood ku dhex martay degaanka Guumays oo ka tirsan gobolka Sool.
Waxaana shalay gaadhay tuuladda Guumays wasiirka wasaaradda Hawlaha Guud iyo Guriyaynta Cabdirisaaq Khaliif Axmed, oo qayb ka ah ergadda nabadeed ee ay xukuumadda Somaliland u dirtay soo af-jaridda shaqaaqadaasi colaadeed ee dhawaan beelaha walaalaha ah dhex martay, taasi oo dhimasho iyo dhaawac keentay oo ka dhacday tuulada Guumays ee gobolka Sool.
C/rasaaq Khaliif, oo xalay khadka telefoonka ugu waramay isagoo joogay tuuladda Guumays, ayaa sheegay in ay ku gudo jiraan nabad ku soo dabbaalidda shaqaaqada ka dhacday Guumays ee dhimashada keentay, iyadoo markaa ka dibna loo gudbi doono isku keenida odayaasha labada dhinac,
Waxaanu tilmaamay in isla shalayba markii ay gaadheen degaankaasi in ay kulamo la yeesheen waxgaradka labadda dhinac, isla markaana ay u muujiyeen sida ay uga xun yihiin dhibaatadii dhacday.
“Maanta(shalay) markii aanu gaadhnay Guumays, waxaanu ugu horayn la kulanay maamulka Gobolka Sool, taliyeyaasha ciidamada millateriga iyo boolis-kaba oo aan aad ugu amaanayo siday shaqaaqadaa dhimashada keentay uga hawl galeen, ee ay awooda u saareen in aan khasaare dambe dhicin.
Waxaa kale oo aanu la kulanay wax garadkii iyo odayaashii deegaanka oo dhamaantood noo muujiyay sida ay uga xun yihiin khasaarihii dhacay, oo ahaa wax shaydaan uu ka adeegay waxaanay wax garadka labada dhinacba noo caddeeyeen in ay diyaar u yihiin in arrinta wada hadal lagu dhameeyo oo nabadda laga wada shaqeeyo waxa meesha ka dhacayna eedeeda lama wada laha ee dhinacbaa leh, oo qaladka la saaray oo dhinaca reer Laascaanood ayaa qaladka leh.
Kadib markii dhalinyaro aanay cidina waxba la ogayn oo hubaysani wax geysteen,waxaanan bilawnay wacyi galinta bulshada iyo hub ka dhigista dhalinyarada hubaysan ee labada beelood haddii ay jiraan” ayuu yidhi wasiirku.
Wasiirka oo aanu waydiinay waxa uga meel yaala ka xukuumad ahaan xurguftaasi dhawaan dhex martay beelahaasi oo soo noq-noqotay, isla la sheegay in ay ka dhalatay muran xagga dhul daaqsimeedka ah.
Waxa uu yidhi “Arrintu dhul lama xidhiidho oo dhul ay labada beelood ku muran san yihiin ma jiro wax shaqaaqad dhuleed ahina ma taagna. laakiin arrintu waxay daba socotay dilal hore oo dhacay waxaanan imika gudo galaynaa in aanu halkaa ku dhamayno oo aanay dhibaato dambe dhicin ka Xukuumad ahaana waxaanu ka hawl galaynaa in aanu isu keeno labada dhinac ee dhibaatadu ka dhex dhacday, oo dil dhex yaallo oo u baahan in kalsooni iyo nabad laga dhex beero.
Waxa kale oo aanu ka shaqaynaynaa in gogol nabadeen oo guurtida iyo culimada iyo madaxdhaqameedka Somalilandba ay gacan ka gaystaan in la isugu keeno oo ugu dambayn halkaa ay ka soo baxaan go’aamo nabadeed oo la isla qaatay. Sababtoo ah arrinta dhammaynteeda iyo xal ka gaadhisteeduba waxay ka go’aysaa, oo ay qusaysaa labada beelood isu keenidooda iyo wada hadalsiintooda.
Manta (shalay) waxaanu kulanay oo aanu is-aragnay odayaasha labada dhinac oo aanu kulan ku wada yeelanay guumays, caawana (xalay) waxaanu wada joognaa garaadkii iyo wax garad kale insha allaah guul iyo nabad ayaanau ku dhamaanaysaa.”
C/rasaaq Khaliif, waxa kale oo uu sheegay in ay ka xukuumad ahaan ka go’an tahay in ay awood dawladeed ku fuliso go’aamo kasta oo ka soo baxa nabadayntaasi oo la isla qaato. Isagoo xusay in tallaabo laga qaadi doono dhinacii ka hor yimaadda go’aamadda ka soo baxa gogosha nabadeed.
“Xukuumadda way ka go’an tahay in ay awood dawladeed ku fuliso wax kasta oo la isku raaco nabadna lag u dhisayo oo halkaa ka soo baxa sida horeba u dhacday marka ay go’aamo nabadeed soo baxaan, Xukuumadda ayay u taalla fulintoodu dalkana dawlad ayaa ka jirta, xilka ugu waynina markaanu xaaladda labada beelood dhex taalla nabad ku soo dhamayno. cid kasta oo ka hor timaadda go’aamada gogosha nabadeed ka soo baxa ee la isla qaato dawladda ayaa tallaabo ka qaadaysa.”
Dhinaca kale wasiirka oo aanu waydiinay waxa uu kaga jawaabayo dadka dhaliila oo ku eedeeya Wasiir aan haysan taageerada dadkiisa iyo gobolka Sool oo uu ka soo jeedo, waxa uu ku jawaabay “Laascaanood waxay Somaliland ku tahay taageerada beeshayda tageerada iyo kalsoonida beeshaydana waan haystaa.
Waxaanan ahay Wasiir Somaliland oo dhan Ayaan wasiir u ahay, cidda leh taageero ma haysto iyo hadalada caynkaas ahina waa cid aan xaqiiqada ogayn ama gees maraysa.”